लहान । विनासकारी भुकम्पपछि पटक पटक साना भुकम्प आउंने गर्छन् । यसमा कुनै एक ठुलो भुकम्प पछि आउने साना साना भुकम्पका धक्काहरुलाई आफ्टरसक (बतभचक्जयअप) भनिन्छ । यदी अझै ठुलो भुकम्प आएमा यस अघिका भुकम्पलाई फरसक(ँयचभक्जयअप) ठुलो भुकम्प अघिका धक्का भनेर भनिन्छ ।
आजको भुकम्पको धक्का युरेसियन प्लेट र भारतिय प्लेटकोबीचमा जम्मा हुदै गएको शक्ति बाहिर निस्कदा आएको हो । बैज्ञानिक अनुसन्धानहरुले यि दुई प्लेटहरु बार्षिक केही सेन्टिमिटरको दरले एक भित्र अर्को घुसिरहेको देखाएका छन ।
जब मुख्य भुकम्पको धक्का आयो तब ति दुई प्लेटहरु केही छुट्टिए या भित्र छिरे तर एकै पटकमा त्यहाँ जम्मा भएको शक्ति बाहीर नआउने सम्भावना धेरै हुन्छ र त्यो शक्ति बिस्तारै बाहीर आउन थाल्छ साना साना भुकम्पको रुपमा । यसरी आउने भुकम्पका केन्द्र बिन्दुहरु केही किलोमिटरको दुरीमा रहन सक्छन । जस्तै आज लमजुङमा गएको मुख्य भुकम्प पछि रसुवा सहित अन्य बिबिध ठाउँलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर धेरै स साना भुकम्प गए ।
कहिले सम्म चल्ला यो क्रम ?
कुनैपनि ठुलो भुकम्पपछि साना साना भुकम्पहरु कति जान्छन र कहिले सम्म जान्छन भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न तर के कुरा हो भने ठुला ठुला भुकम्प पछि साना भुकम्प अबस्य आउछन । जापानमा सन २०११ मार्चमा गएको महाभुकम्प पछि करिब २० दिनसम्म यस्ता भुकम्पहरु गए । तर आज गएको भुकम्प त्यती ठुलो नभएकोले यति धेरै दिन सम्म जारी रहला बन्न सकिन्न । तर जापानमै २००३ मा गएको ८ रेक्टरस्केलको भुईचालो पछि करिब ६ दिनसम्म स साना भुकम्प आईरहेका थिए ।
नेपालमा आज बेलुकी ७ः५५ सम्मको रेकर्ड अनुसार २६ वटा स साना भुकम्प गएका छन तर यो क्रम कहिले रोकिएला ? हामीले केही पुराना तथ्यहरु हेर्ने हो भने यो क्रम भोली पर्सी सम्म रहने निकै धेरै संभावना छ ।
नेपालकै इतिहासमा सबै भन्दा प्रलय एवं विनाशकारी भुकम्पले शनिबार मध्याहृन ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । यसअघि यो भन्दा बीभत्स र विनाशकारी १९९० माघ २ गतेको भूकम्पलाई मानिन्छ । संखुवासभा जिल्लाको चैनपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ८.४ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको थियो । यस पटक ७.९ रेक्टर स्केलको भुकम्प गएको हो । उक्त भूकम्पमा परी तीन हजार ८ सय ५० पुरुष र चार हजार ६ सय ६९ महिला गरी जम्मा आठ हजार ५ सय १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करीब चार हजार ५ सय जनाले ज्यान गुमाए । घर, विद्यालय, देवालय र पाटीपौवा तथा सार्वजनिक भवनसमेत दुई लाख सात हजार ४० वटा संरचना भत्किएको अभिलेख छ ।
भुकम्पका जानकारका अनुसार शनिवार बिहान गएको भुकम्प १९९० सालपछिको ठूलो हो । गोरखा र लमजुङको सीमा बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.९ रेक्टर स्केलको भुकम्पका कारण करिब २ हजारबढीको ज्यान जान सक्ने बताएको छ । एकिन संख्या आउन बाँकी नै छ ।
सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ । त्यसपछि काठमाडौं ,भत्तपुर र ललितपुरमा धेरैको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ । राजधानीका अधिकांश अस्पतालमा विरामीको भिड छ । पटक पटक भूकम्पको धक्का महसुस भएका कारण अस्पतालहरुले समेत विरामीहरुलाई बाहिर नै राखेर उपचार गरिएको छ ।
भूकम्पको केन्द्र भनिएको गोरखाको बार्पाकतर्फ नाइट भिजन हेलिकोप्टर पठाइएको छ । भूकम्पले २७ जिल्ला प्रभावित भएको छ । अहिले पनि विवरण संकलनको काम भइरहेको छ ।
२०७० सालको असोज २ मा सिक्किम र ताप्लेजुङको सीमामा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६.८ रेक्टरस्केलको भुकम्पले पनि पूर्वी नेपालमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यतीबेला काठमाडौंमा ठूलो कम्पन महसुस भए पनि खासै क्षति भएको थिएन ।
यसैगरी, २०४५ सालको भदौ ५ गते बिहान पौने पाँच बजे गएको भुकम्पले पनि निकै क्षति पु¥याएको थियो । उदयपुरस्थित मुर्कुचीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी करीब ७ सय ५० जना ज्यान गुमाए भने छ हजार ५ सय भन्दा बढी घर भत्किए ।
नेपालमा गएका भूकम्प मध्ये १२१८ सालको रेकर्ड गरिएकामध्ये पहिलो विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ । १२१८ सालको असार शुक्ल तृतीया तिथि सोमवारका दिन करीब ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । यही भूकम्पमा परी राजा अभय मल्लको निधन भएको थियो ।
यो भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाका एकतिहाई जनसंख्यालाई प्रभाव पारेको थियो । स्थानीय बासिन्दाले १५ दिनदेखि एक महिनासम्म शहर छोड्नुपरेको थियो । रेकर्ड गरिएकामध्ये १३१६ सालको भुकम्प पनि विनाशकारी नै हो । यो भूकम्पले पनि अत्यासलाग्दो भएको अनुमान छ ।
यस्तै, १४६५ सालमा आएको भूकम्पले रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरलगायत अन्य दर्जनौं मन्दिर ढलेका थिए । यस भूकम्पले सयौं मानिस तथा पशुको ज्यान जानुका साथै हजारौं घर भत्किए । १८२४ सालको असार १ गते एकैदिनमा २१ पटक भूकम्पको धक्का महसूस गरियो ।
यस्तै, १८६७ सालको जेठ १० गते गएको भूकम्पबाट काठमाडौं र ललितपुरमा ठूलो मानवीय क्षति त भएन तर मठमन्दिर भने प्रशस्त मात्रामा भत्किए । १८८० सालमा यमपञ्चकका दिन एकैदिनमा १७ पटक भूकम्प गएको थियो ।
१८९० सालको भदौ १२ गते सोमबार बेलुका करीब ६ बजेतिर ठूलो विनाशकारी भूकम्प गएको थियो । त्यही भुकम्पले काठमाडौंमा रहेका दुईवटा धरहरामध्ये एउटालाई पूरै ढाल्यो भने अर्को आधा मात्र भत्कियो ।
त्यही वर्षको असोज १० गते राति अर्को भूकम्प गएको थियो । यस्तै, १८९१ सालको असार र असोज महिनामा फेरि दुईवटा ठूला भूकम्प गए । पानी परिरहेका बेलाका यी भूकम्प गएको बागमतीमा ठूलो बाढी आयो । चिलीमा १९६० सुनामी ल्याएको ९.५ रेक्टर स्केल,कम्तिमा १ हजार ७ सयको मृत्यु, अलास्का, १९६४, ९.२ रेक्टर स्केल, १ सय ३१ को मृत्यु भएको थियो ।
सर्वोच्च शिखरमा हिमपात
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा समेत भुकम्पको ठूलो धक्कापछि विशाल हिमपहिरो गएको उल्लेख गरेको छ । आधार शिविरमा हिमपहिरोले कैयन् टेन्ट पुरेको छ । केहीको मृत्यु भएको खबर छ । ती सञ्चारमाध्यमले कम्तिमा ८ जनाको मृत्युभएको र अन्य कैयन् सम्पर्क्बिहीन भएको प्रारम्भिक समाचारमा सिएनएनले उल्लेख गरेको छन् ।
यसैबीच, उद्दारका लागि ५० जना चिकित्सकसहित भारतीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । भारतीय वायु सेनाको विशेष बिमानमार्फत ४ सय टन औषधी र उद्दार सामग्रीसहित टोली आइपुगेको हो ।
त्रिभुवन बिमानस्थलका महाप्रबन्धक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार भारतीय टोली पौने ६ बजे बिमानस्थल आइपुगेको हो ।
इन्डोनेसियाबाट थाइल्याण्ड पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरुलालाई टेलिफोन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
दर्जन पटक गएको भूकम्पका कारण नेपालको राजधानीसहित विभिन्न जिल्लाको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । भूकम्पका कारण हालसम्म १७ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
उता, छिमेकी देश भारतले पठाएको सहयोगमा उद्धारकार्यका विज्ञका साथै कुकुरहरु पनि रहेका छन् । यी कुकुरहरुले कुनै मानिस भग्नावशेषमा फसकेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनेछन् । साथै, राहतका सामग्रीहरु कम्बल, टेन्ट सहित उपचार गर्ने उपकरण पनि भारतीय टोलीले साथमा ल्याएको बताइएको छ । यसैगरी भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले बाबा रामदेवसँग सम्पर्क गरेको तर यस दुखद घडीमा बाबा रामदेवले काठमाडौंमा नै रहने ईच्छा व्यक्त गरेको बताएकी छिन् । अर्कोतर्फ छिमेकी मुलुक चीनले आइतबार उद्धार तथा राहतका निम्ति आफ्नो सहयोग र टोली पठाउने तयारी गरेको छ । यस दुःखद घडीमा चिनियाँ जनता नेपाली जनताको साथमा रहेको भन्दै जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । भारतमा र चीनमा समेत केही व्यक्तिको ज्यान जानेगरी नेपालमा आएको महाभूकम्पमा परी मृत्यु भएकाहरुप्रति चीनले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । यसैबीच अमेरिकाबाट पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
वैशाख १२ चीन सरकारले नेपालमा भुकम्पले निम्त्याएको महाविपत्तीप्रति चीनले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै कारण ठूलो जनधनको क्षतिप्रति आवश्यक जस्तोसुकै सहयोगका आफू लागि तयार भएको जनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले शनिबार अबेर समकक्षी रामवरण यादवलाई एक पत्र पठाउँदै यस्तो सहयोगको जानकारी गराएका हुन् । यसैबीच चीनले आइतबार उद्वार टोलीसहित सहयोग पठाउने भएको छ । चीनले आइतबार करिब ६५ जना तालिमप्राप्त उद्वार टोली र अत्यावश्यक बन्दोबस्तीका सामाग्रीसहितको विशेष विमान पठाउन लगाएको हो ।
यता, गएको भुकम्पवाट आफन्तलाई आफू सुरक्षीत रहेको जानकारी गराउन फेसवुकले ‘आइएम सेफ’ को पहल गरेको छ । आफ्नो सम्पर्कमा रहेकाहले फेसवुकले सुरु गरेको आइएम सेफ मा क्ल्कि गरेपछि आफ्नो फेसबुकमा रहेका सबै साथीहरुलाई उक्त सन्देश जाने छ ।
11174689_957003581018485_3404563457617708072_o.jpg (128 KB) Download
tawer.jpg (28 KB) sundhara vatkio KTM ma Download
11160145_1043636225665018_1147370082_n.jpg (134 KB) lahan ma bisnudev ko ghar vatkiya ko Download
11175037_1571479059770483_5471104300127422456_n.jpg (15 KB) janki mandir jankpur Download